यदि भारत दोस्रो शक्ति राष्ट्र भए अमेरिकाले कस्तो व्यवहार गर्नेछ? – BANKE POST
यदि अर्थतन्त्र र सैन्य शक्तिमा भारत दोस्रो ठूलो शक्ति भयो भने अमेरिकाले भारतलाई कस्तो व्यवहार गर्ने छ? के अमेरिकाले भारतलाई रोक्न को निम्ति जापान, चीन, अष्ट्रेलिया, फिलिपिन्स इत्यादि को संगठन बनाउन सक्छ र?
भारतलाई अमेरिकाले प्रभावशाली लोकतान्त्रिक देशका रूपमा लिन्छ। दुई देश बीच कुनै ठूलो वैचारिक भिन्नता छैन। यदि त्यसो हो भने भारतले विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बनेमा अमेरिकाले कस्तो प्रतिक्रिया देखाउनेछ?सर्वप्रथम, यो स्पष्ट गर्नुपर्दछ कि चीनलाई पछाडि पारेर दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्न भारतको लागि लगभग असम्भव छ। तर तर्कको खातिर यदि भारतले चीनलाई प्रतिस्थापन गर्‍यो भने अमेरिकाले भारतलाई समेट्ने र डोरी अडकाउने कार्य गर्दै विश्व शक्ति हुन बाट रोक्नेछ। यो निश्चितप्रायः नै हो। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा जुनसुकै देश दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बने पनी अमेरिकाले यसलाई खतराको रूपमा लिने छ र यसलाई समाहित गर्ने छ। तर कन्टमेन्टका विधिहरू बिभिन्न हुन सक्छन्।
वर्तमानमा वाशिंगटन र नयाँ दिल्ली एक अर्काको नजिक पुगेका छन्। उदाहरणका लागि, धेरै अमेरिकी राजनीतिज्ञहरूले जूनमा गाल्वान उपत्यकामा भएका झगडालाई सार्वजनिक रूपमा भारतलाई समर्थन गरेका थिए। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पीओले उक्त झडप चीनको “अस्वीकार्य व्यवहार” को ताजा उदाहरण भएको बताए।
अमेरिकाको समर्थन पछाडिको मुख्य कारण यो हो कि भारतको वर्तमान राष्ट्रिय शक्ति अमेरिकाको निम्ति खतरा होइन र चीनलाई समेट्न भारतको साथ लिनुपर्ने कुरा मा विश्वास गर्दछ। अर्को महत्त्वपूर्ण कारण यो हो कि अमेरिकाले भारतलाई चीनलाई नियन्त्रण गर्न निकै उपयुक्त ठान्छ। यो एक महाशक्ति को रूपमा अमेरिकाको बदमाशी र दमनको लगातार शैलीको साथ अनुरूप छ।
अमेरिकाले चीनलाई तल झार्न धेरै रणनीतिहरू अख्तियार गरेको छ। पूर्वीय सभ्यताको प्रगति हुँदै जाँदा पश्चिमी शासनका कमजोर तत्वहरूले आफूलाई प्रकट गरेका छन्। COVID-19 को संकटप्रति चीन र अमेरिकाको सम्बन्धित प्रतिक्रिया यसको प्रख्यात उदाहरण हो।
चीनले COVID-19 संगको लडाई सफलतासँग व्यवस्थित गरेको छ र विभिन्न फाइदाहरुलाई प्रतिबिम्बित गरेको छ। यसै बीच, वर्तमान अमेरिकी आर्थिक गिरावटको चीनको उदय र सफलतासँग कुनै सरोकार छैन। अमेरिकाले विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रलाई दबाउन सक्दैन, किनकि अमेरिकाको प्रणालीमा त्रुटिहरू मात्र छन्। दोस्रो शक्ति राष्ट्रलाई शत्रुको रुपमा नभई मित्रको रूपमा हेर्न आवश्यक छ।लेखक – शिबराज कार्की
२२ फाल्गुन, चन्द्रौटा(कपिलवस्तु) । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै कपिलवस्तु लगायत देशभर द्वीप प्रज्वलन गरिएको छ । सोही क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीको मृगौला प्रत्यारोपण सफल भएको खुशियालीमा जिल्लाको शिवराज नगरपालिका ३, मदरवामा द्वीप प्रज्वलन गरिएको छ । स्थानीय कमलराज गिरी सहितका युवाहरुको अगुवाईमा बुधबार साँझ द्वीप प्रज्वलन तथा शुभकामना आदानप्रदान गरिएको हो । काठमाडौं […]
शपथ ग्रहण तथा सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न
Posted on March 15, 2020 March 15, 2020 Author Hari Adhikari
२ चैत्र, बाँके । केन्द्रीय मोहरर्म पर्व तथा कर्बला व्यवस्थापन समिति केन्द्रीय कार्यालयको आयोजनमा शपथ ग्रहण समारोह, साधारण सभा तथा सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । नेपालगञ्जको नयाँ कार्यसमितिमा पुनः गुलाम हुसेन हल्वाईको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन भएको छ । केन्द्रीय मोहरर्म पर्व तथा कर्बला व्यवस्थापन समितिका नवनिर्वाचित कार्यसमिति बरिष्ठ उपाध्यक्षमा मो. ईशाहक […]
कोरोना देखि सजक रहन प्रहरी र व्यापारी को आग्रह
Posted on April 4, 2021 April 4, 2021 Author Hari Adhikari